Guddoomiyaha Horyaal TV Oo Ka Hadlay Xadhiga Weriye Hoodo Garays | Gabiley News Online
Guddoomiyaha Horyaal TV Oo Ka Hadlay Xadhiga Weriye Hoodo Garays
Guddoomiyaha telefishanka Horyaal TV Maxamed Cismaan Mirre (Sayid), ayaa wax laga xumaado ka xumaaday jidh dil iyo dhaawacyo ay ciidamadda booliska Hargaysa u gaysteen weriye Hoodo Garays iyo hooyadeed.
Falkaasi oo ay ciidamadda booliska ee saldhiga xaafadda Qudhac-dheer kula kaceen weriye Hoodo Garays oo ka hawl gasha Horyaal TV iyo hooyadeed, iyadoo ay weli weriye Hoodoo o dhaawacyo qabtaa ku xidhan tahay saldhiga Qudhac-dheer.
Maxamed Cismaan Mirre, ayaa falkaasi ku tilmaamay tacadi iyo mid aan la qaadan Karin oo ka baxsan anshaxa iyo hab dhaqanka ciidamadda booliska Somaliland.
Sidoo kale guddoomiye Sayid, waxa uu ka hadlay ficilo ay kala kulmeen booliska Qudhac-dheer, kadib isku day ay maanta sameeyeen isaga iyo masuuliyiin ka tirsan ururka SOLJA oo ay ku doonayeen in ay ku booqdaan weriye Hoodo Garays.
Isagoona sheegay in booliska Qudhac-dheer markii ay saldhiga tegeen ay si anshaxa ka baxsan ula dhaqmeen isaga iyo masuuliyiintii la socday, isla markaana ay iyagii tacadi kula kaceen.
Geesta kale, guddoomiye Sayid, ayaa sidoo kale ugu baaqay madaxweynaha Somaliland iyo taliyaha ciidamadda booliska in ay wax ka qabtaan falalka tacadiga ah ee ay boolisku weriyahan kula kaceen.